Holland Oo Ku Garaacday Xulka England Garoonka Wembley Ka Hor Inta Uusan Hodgson Ku Dhawaaqin Xulkiisa Euro 2016. (Daawo Goolasha) | Haqabtire News
Holland Oo Ku Garaacday Xulka England Garoonka Wembley Ka Hor Inta Uusan Hodgson Ku Dhawaaqin Xulkiisa Euro 2016. (Daawo Goolasha)
England ayaa waxaa soo gaartay guuldarro kulankii saaxiibtinimo ee ay caawa la ciyaareen xulka Netherlands, waana kulankii saaxiibtinimo ee ugu danbeeyay ee ka hor inta uusan Roy Hodgson magacaabin xulkiisa uu la shirtagayo Euro 2016 iyadoo kooxda Three Lions ay ku dhibtootay inay dib u soo hesho qaab ciyaareedkii Berlin.
Tababaraha xulka England ayaa go’aansaday inuu xilli hore magacaabo 23ka ciyaaryahan ee uu u kaxeysanayo France xagaaga ka hor inta aan la gaarin kulamada kale ee saaxiibtinimo, laakiin isbedelo badan oo lagu sameeyay shaxda ayay England soo saari weysay qaab ciyaareedkii ay guusha kaga gaartay Germany seddex maalin ka hor.
Ka dib ciyaar aan xiiso laheyd oo qeybtii hore dhacday iyo xus loo sameeyay Johan Cruyff, Jamie Vardy ayaa goolasha furay wax yar ka hor waqtigii nasashada ka dib si wanaagsan oo ay iskula jaan qaadeen xulka England iyadoo kubad uu u soo celiyay Kyle Walker uu shabaqa si fudud ku dhex dhigay.
Xulka martida loo ahaa oo laga badiyay shan ka mid ah sideedii kulan ee ugu danbeysay ee ka hor kulankii caawa ayaa horumar sameeyay qeybtii labaad, waxaana la siiyay fursad ay ciyaarta ku barbareeyeen markii Danny Rose uu kubad gacanta ku taabtay isagoo ku jira xerada goolka, iyadoo Vincent Janssen uu u soo istaagay islamarkaana shabaqa dhex dhigay kubada kulankiisii ugu horeysay ee buuxa ee uu u saftay xulka Danny Blind.
England ayaa ku dhibtootay inay abuurto fursado laakiin waxa ay isku dayeen inay helaan goolka guusha iyagoo soo geliyay Harry Kane, laakiin waxaa dadaalkooda meesha ka saaray markii Janssen uu kubad ka dulqaaday Phil Jagielka isagoo u karoosay Luciano Narsingh kaasoo shabaqa dhex dhigay.